Andrasan’ny mpanara-dia an’I Andry Rajoelina sy ny mpanara-baovao ny ho fanehoan-keviny manoloana izao toe-javatra mahazo an’ity olona akaiky azy, sady mpitarika ny vondrona politika MAPAR (Miaraka Amin’ny Prezida Andry Rajoelina) ity izao. Tsy hay aloha hatreto izay mety hambarany na hanameloka ny fihetsiky ny fitondrana na hanao raharaham-pihavanana ka hangataka ny hamotsorana ity farany, na koa hisafidy ny hangina. Ianjadian’ny fanenjehana isan-karazany ireo olon-dRajoelina amin’izao, saingy toa tsy afa-manoatra ny tenany. Any am-ponja I Alain Ramaroson, izay niara-niketrika ny raharaha 2009 taminy. Enjehina ary miery mandrak’ankehitriny ny kolonely Lylison. I Augustin Andriamananaro moa dia iny niaraha-naheno iny ny nisamborana azy ny sabotsy teo. Mety hiafara any amin’I Andry Rajoelina ity tantara ity, raha izao no mitohy.